Hargaysa 09.Aug 2016 (SDN/QJ):- Askarta Ilaalada Wasaaradda Waxbarashada Somaliland ayaa Shalay Agaasimaha Guud ee wasaaraddaasi Md. Abiib Axmed Cali ka hor joogsatay in uu xafiiska wasaaradda soo galo kadib markii uu sidaa amar ku bixiyey Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Mudane Cabdilaahi Ibraahim Habane. Goob-jooge Wargeyska FOORE arrinkan wax ka waydiiyey ayaa noo xaqiijiyey […]
Gudoomiye C.raxmaan Cirro oo Faahfaahin ka Bixiyey Ujeedada Socdaal uu ugu Maqnaa Waddamada Yurub DAAWO
Hargaysa 29.June 2016 (SDN/QJ):- Gudoomiyaha Golaha Wakiiladda ahna Gudoomiyaha Xisbiga Waddani Mudane C.raxmaan Maxamed C.laahi Cirro oo Mudooyinkii u danbeeyay Socdaal ku joogay qaar ka mid ah Waddamada Yurub oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa faahfaahin ka bixiyey Ujeedada Booqashadiisa.
London, 28 June, 2016-(SDN/QJ) :– Codbixintii Britain ay Midawga Yurub Kaga Madax Banaanaatay oo Sababay in 400 Qof oo Ka Mid ah Tujaarta Dunidu Khasaaraan Lacag Gaadhaysa $127 Bilyan. Cod bixintii Ingiriisku kaga baxay is bahaysiga midawga yurub ayaa waxa uu sababay khasaare ay dhaqaale badan khasaareen tujaarta adduunku. Cod bixintani waxa ay sababtay in […]
(DAAWO) 50-kii Goolhaye ee Ugu Fiicnaa Iyo Goolashii Aay Badbaadiyeen. (Jaahuur)
Ottawa-May-08- (SDN/QJ) Asxaabtay qormadeena ciyaaraha waxaynu Maanta ku cabireynaa goolhayaashii ugu wanaagsanaa iyo goolashii aay badbaadiyeen. Haddaba aaynu jaleecno 50-kii goolhaye ee ugu cajiibsanaa.
Posted in Features,Sports,Wararkii ugu Dambeeyay | Read More »
(DAAWO) Ciyaartii Aay Man United Final-ka Ugu Soo Baxdey(Fa Cup) Jaahuur.
London-Apr-24-2016-(SDN/QJ) Asxaabtay qubanaheena ciyaaraha waxaynu ku bidhaamineynaa horyaalka Ingiriiska (premier league) oo gabagabo heehaabanaya iyo Man United oo u soo baxdey Final-ka waxayna isku faataxaysan doonaan Crystal Palace. Haddaba horyaalkan ayaa Leicester sii adkeysatey markii 4-0 uga badisey Swansea. Ciyaarta final-ka ah ee dhexmaridoonta Man United iyo Crystal Palace waxay ka dhici doontaa (Wembley) Bisha […]
(DAAWO) Ciyaartow Dhameystiran Kulankii Sergio Aguero Iyo Chelsea premier League (Jaahuur)
London-Apr-17-2016-(SDN/QJ) Saaxiibayaal qormadeena ciyaaraha waxaynu maanta ku eegeynaa ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Ingiriiska,waxaana foodda isla galey labada naadi ee aan rajada ka lahayn inay hantiyaan koobkan waa Man City iyo Chelsea. Man City waxay u soo baxdey (semi Final-ka) koobka Yurub waxayna isku naf bixidoonaan Real Madrid haddaba daawo sidey u karbaashtey Chelsea. W/Q Jaahuur […]
(DAAWO) Leicester oo Urisey Horyaalka (Premier League) Markii Aay Ku Dur-durisey Sunderland.(Jaahuur)
London-Apr-10-2016 (SDN/QJ) Akhyaartay qormadeena ciyaaraha waxaynu maanta ku laacayna horyaalka Ingiriiska oo kooxihii tunka weynaa oo rajo beeshey. Haddaba naadiga Leicester oo bahweynta ciyaaraha jecel maabkaba ugu jirin inay kaalimaha hore timaado ayaaba sanka u saran iney ku guuleysato horyaalka. Leicester waxay ku hogaamineysaa horyaala 72-tan dhibcood waxaana sanka ku haysa Tottenham oo leh 65 […]
(DAAWO) Ciyaarta oo dhameystiran Barzil Iyo Uruguay oo Isku Nafbaxay u Soo Bixdda Koobka Aduunka 2018.(Jaahuur)
Pernambuco Stadium-Mar-27-2016(SDN/QJ) Saaxiibayaal qubanaheena ciyaaraha waxaynu ku iftiimineynaa is reeb-reebka koobka kubadda cagta ee aduunka 2018 oo si xasaasi ah ugu socda Waqooyiga Ameerika. Haddaba ciyaar aad loo sugayey ayaa waxa isku hirdiyey xulka Brazil iyo xulka Uruguay daawo waxay kala macaasheen. W/Q Jaahuur SDN/QJ jjaahuur@Hotmail.com
(DAAWO)Man United oo Caraabisey Man City. (Jaahuur)
London-Mar-20-2016 (SDN/QJ)Asxaabtay qormadeena ciyaaraha waxaynu maanta ula baqooleynaa xagaa iyo cariga Ingiriiska oo uu si xasaasi ah uga socda horyaalka (Premier League) waxaana sanka isku wadahaya Leicaster,Tottenham,Arsenal,Man City iyo Man United. Haddaba ciyaartii xiisaha badneyd ee la wadasugayey waxaa isku nafbeeley labada naadi ee aay xurguftu ka dhaxayso Man United iyo man City,bal aaynu eegno […]
(DAAWO) Barcelona oo u Abtirisey Cetafe Fc.(Jaahuur)
Spain-Mar-14-2016 (SDN/QJ) Saaxiibayaal qormadeena ciyaaraha waxaynu ku bidhaamineynaa horyaalka ka amar tukaaleeya wadanka Isbaanishka laguna magacaabo La Liga. Haddaba badanka koobabka laga ciyaaro dalkaas aalaba waxaa ku guuleysta labada naadi ee ugu tunka weyn Barcelona iyo Real Madrid. Walow Barcelona aay ku hogaamineyso dhibco badan hadana Real Madrid waxay haabhabaneysaa kaalinta afaraad. Bal aynu daawano […]